Francois Hollande:MANOHANA AN’I MADAGASIKARA HATRANY I FRANTSA -
AccueilRaharaham-pirenenaFrancois Hollande:MANOHANA AN’I MADAGASIKARA HATRANY I FRANTSA
28/11/2016 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nankasitraka ary manohana hatrany. Tsy nihambahamba mihitsy ny filoham-pirenena Frantsay, François Hollande, tamin’ny fanambarana nataony, fa manohana ary eo anila sy akaikin’i Madagasikara hatrany i Frantsa. Hatramin’ny nahazoan’i Madagasikara ny fahaleovantena, hoy ity filoham-pirenena frantsay ity, vitan’i Madagasikara ny nampivondrona sy nandray ireo filoham-pirenena sy governemanta mihoatra ny 30 isa ka nanamafisan’izy ireo fa afaka mandray sy mampiantrano hetsika iraisam-pirenena goavana hatrany i Madagasikara.
Nilaza izy fa mankasitraka ary mankahery an’i Madagasikara ny sy ezaka nataon’ny fitondram-panjakana, tarihin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina, ny tenany, izay misolo tena ny vahoaka Frantsay, tamin’ny fahatomombanan’ny fandraisana ny fihaonana an-tampony ny Frankôfônia, andiany faha-16, nizotra teny amin’ny CCI Ivato, ny 22-27 Novambra teo.
Araka izany, notsindrian’ity filoha Frantsay ity fa mila mametraka sy mitady fitoniana ara-politika i Madagasikara amin’izao fiverenany eo amin’ny vondrona iraisam-pirenena izao. Nambarany ihany koa fa maromaro ireo fiaraha-miasan’i Frantsa amin’i Madagasikara ary efa nanolotra ny Agence Française de Développement (AFD) izy ireo ka nampitombo ny tetikasa ho an’i Madagasikara eo amin’ny sehatry ny toho-drano manondraka sy mamokatra herinaratra, ireo fotodrafitrasa goavana, toa ny seranam-piaramanidina, sns. Niresaka mikasika ny tsy fandriam-pahalemana ihany koa ny tenany izay, nisaorany manokana ny ezaka ataon’ny fanjakana malagasy amin’izao fotoana izao. Teo ihany koa ny nanambarany fa antony iray hanohanany sy hanampiany an’i Madagasikara ny fiarovan’ny Malagasy an’i Frantsa nandritra ireny ady lehibe ireny.
Anisan’ny nisongadina ihany koa ny fanampian’i Frantsa an’i Madagasikara amin’ny famondronana sy fiantsoana ireo mpamatsy vola. Manaraka izany, ny fanampian’i Frantsa an’i Madagasikara amin’ny fampianarana ny teny frantsay.
Nanambarany fa manana ny lanjany ara-politika sy ny demokrasia eo amin’ny zon’olombelona sy ny vehivavy ny Frankôfônia. « Ny maha Frankôfôna tsy ny fitenanana ny teny frantsay ihany fa firesahana ny lanja iraisana amin’ny samy firenena, indrindra ny fanajana tanteraka ny fifidianana mangarahara sy ny fanajana ny lalàm-panorenana, ary indrindra indrindra ny fanomezana sehatra sy fanomezan-jo ny vehivavy, izay matetika voahilika hatrany, sns », hoy hatrany i François Hollande. Farany, notsindriany mafy fa tokony hiara-hiady hanafoana ny fahafanam-po tafahoatra (fanatisme) sy ny fihetsika mahery ny rehetra ary miara-miasa mitady vahaolana amin’ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny ady atao amin’ny fiovan’ny toetr’andro, sns.